Sant'Eusebio di Vercelli, Saint nke ụbọchị maka 2 August | Ilblogdellafede
Sant'Eusebio di Vercelli, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 2nd
(ihe dịka 300 - Ọgọst 1, 371)
Akụkọ banyere Sant'Eusebio di Vercelli
Mmadu kwuru na oburu na anaghi aria anakpo nke Aryan gọnariri nke Chi nke Kraist, na ogabu ihe siri ike ide ndu nke otutu ndi mbu. Eusebius bụ onye ọzọ gbachitere ụka n’oge otu n’ime oge kacha sie ike.
Amụrụ na agwaetiti Sardinia, ọ ghọrọ onye otu ụkọchukwu Rome ọ bụ bishọp mbụ aha Vercelli edere na Piedmont na northwest Italy. Eusebius bụkwa onye mbụ jikọtara ndụ monastic na nke ndị ụkọchukwu, na-ewulite obodo nke ndị ụkọchukwu diocesan ya dabere na ụkpụrụ nke ụzọ kachasị mma iji doo ndị ya nsọ bụ igosi ha ndị ụkọchukwu guzobere n’ezi omume na ibi n’obodo. .
Poopu Liberius zitere ya ka o mee ka eze ukwu mee nzuko ka o dozie nsogbu Katolik na Arian. Mgbe a kpọrọ ya na Milan, Eusebius lara azụ, na-adọ aka na ntị na ndị otu Arian ga-aga, n'agbanyeghị na ndị Katọlik ka ọtụtụ. Ọ jụrụ ịgbaso ikpe nke St. Athanasius; Kama, O debere Okwukwe nke Nicene na tebụl ma sie ọnwụ na onye ọ bụla bịanyere aka na ya tupu ya ekwuo okwu ndị ọzọ. Eze ukwu ahụ manyere ya, ma Eusebius siri ọnwụ na Athanasius dị ọcha ma cheta eze ukwu na e kwesịghị iji ike ọchịchị metụta mkpebi Churchka. Na mbu, eze ukwu yiri egwu igbu ya, ma emesịa zigara ya jee biri na Palestine. N'ebe ahụ, ndị Aryan dọkpụrụ ya n'okporo ụzọ ma mechie ya obere obere ụlọ, na-ahapụ ya mgbe agụụ mmiri were ụbọchị anọ.
Ọpụpụ ya gara n’ihu n’Eshia Maịnọ na n’Ijipt, ruo mgbe eze ukwu ọhụrụ kwere ka a nabata ya ọzọ n’oche ya na Vercelli. Eusebius sooro Athanasius na Council nke Aleksandria wee kwado nnabata nke ndị bishọp bụ ndị kwụsịlatara. Ya na St Hilary nke Poitiers rụkwara ọrụ megide ndị Aryan.
Eusebius nwụrụ n'udo n'ime ọgbakọ nzukọ ya n'oge agadi.
Mgbe ụfọdụ ndị Katọlik na United States nwere mmetụta nke ịta ntaramahụhụ site na nkọwa na-ezighi ezi nke ụkpụrụ nke ikewapụ nke ụka na ala, ọkachasị n'okwu ụlọ akwụkwọ Katọlik. Ka o si dị, ,ka taa nwere ọ freeụ na enwere onwe ya pụọ ​​na nnukwu nrụgide a na-enwe ya mgbe ọ mechara bụrụ 'ọgbakọ guzobere' n'okpuru ọchịchị Constantine. Obi dị anyị ụtọ iwepụ ihe dị ka poopu na-arịọ eze ukwu ka ọ kpọọ kansụl ụka, na ọ bụ eze ukwu zigara Poopu John nke Izizi na East, ma ọ bụ nrụgide site n'aka ndị eze na ntuli aka papal. Churchka enweghị ike ịbụ onye amụma ma ọ bụrụ na ọ bụ n’akpa uwe mmadụ.
← Na post gara aga Gara aga post:Chee maka obere onyinye ọ bụla ị nwere ike inye taa
Ọzọ Post → Post ozo:Nraranye nye Chineke Nna n’August: Rosary